OTU ESI ESI NA TWITTER - TWITTER - 2019
Ịmepụta akaụntụ ọ bụla na netwọk ahụ, ị ​​kwesịrị ịma mgbe niile esi esi na ya pụta. O nweghị ihe dị iche ma nke a ọ dị mkpa maka ihe nchebe maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye akaụntụ ọzọ ikikere. Isi ihe bụ na ị nwere ike ịhapụ Twitter ngwa ngwa ma ngwa ngwa.
Anyị na-ahapụ site na Twitter na ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu
Usoro nke na-enweghị ikike na Twitter dị mfe ma kwụ ọtọ dịka o kwere mee. Ihe ọzọ bụ na na ngwaọrụ dị iche iche algorithm nke omume na nke a nwere ike ịbụ dịtụ iche. "Wepụta" na ụdị ihe nchọgharị nke Twitter na-enye anyị otu ụzọ, na, dịka ọmụmaatụ, na ngwa Windows 10 - dị iche. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịtụle nhọrọ niile dị mkpa.
Nchọgharị Nchọgharị Twitter
Ịbanye na akaụntụ Twitter na ihe nchọgharị nwere ike ịbụ ihe kachasị mfe. Otú ọ dị, algorithm nke omume maka ịbanye na ntanetị adịghị egosi onye ọ bụla.
Ya mere, iji "abanye" na ntinye ihe nchọgharị nke Twitter, ihe mbụ ị ga - eme bụ imeghe menu "Profaịlụ na Ntọala". Iji mee nke a, pịa nanị bọtịnụ anyị. Tweet.
Ọzọ, na menu ndọpụta, pịa ihe "Akara".
Ọ bụrụ na nke a gasịrị ị nọ na ibe ahụ na ọdịnaya ndị na-esonụ, ma ụdị nbanye ahụ na-arụ ọrụ ọzọ, ọ pụtara na ị hapụrụ akaụntụ gị nke ọma.
Ngwa ngwa Twitter maka Windows 10
Dịka ị maara, onye ahịa nke ọrụ mgbasa ozi microblogging kachasị ewu ewu dị ka ngwa maka ngwa mkpanaka na desktọọpụ na Windows 10. N'otu oge ahụ, ọ dịghị mkpa ebe a na - eji ihe omume ahụ - na smartphone ma ọ bụ na PC - usoro nke omume bụ otu.
Mbụ, pịa akara ngosi na-egosipụta mmadụ.
Dabere na nha ihuenyo nke ngwaọrụ gị, akara ngosi a nwere ike ịchọta ma n'okpuru na n'elu nke usoro ihe omume ahụ.
Ọzọ, pịa akara ngosi ahụ na mmadụ abụọ dị nso bọtịnụ ahụ "Ntọala".
Mgbe nke ahụ gasịrị, na menu ndọpụta, họrọ ihe ahụ "Akara".
Mgbe ahụ, anyị kwadoro enweghị ikikere na igbe nzacha.
Na nke ahụ niile! Akara site na Twitter maka Windows 10 rụzuru nke ọma.
Ndị na-elekọta igwe maka iOS na gam akporo
Ma na ngwa gam akporo na iOS, njirimara algorithm na-enweghị ikikere. Ya mere, a ga-atụle usoro ịbanye na akaụntụ ahụ na ndị na-ahụ maka ekwentị na ihe atụ nke ngwaọrụ nke "Green Robot" ejiri.
Ya mere, nke mbụ, anyị ga-aga n'akụkụ menu nke ngwa ahụ. Iji mee nke a, dị ka ọ dị banyere ụdị ihe nchọgharị nke ọrụ ahụ, pịa akara ngosi nke akaụntụ anyị, ma ọ bụ swipe n'aka nri site n'aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Na ndepụta a, anyị nwere mmasị na ihe ahụ "Ntọala na Nzuzo". Gaa ebe ahụ.
Mgbe ahụ soro mpaghara "Akaụntụ" ma họrọ ihe "Akara".
Ọzọkwa anyị na-ahụ akwụkwọ ikike na edemede ahụ "Welcome to Twitter".
Nke a pụtara na anyị "abanye" n'ụzọ gara nke ọma.
Ndị a bụ ụzọ dị mfe ị ga-esi rụọ ọrụ iji banye na Twitter na ngwaọrụ ọ bụla. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe mgbagwoju anya banyere ya.